Goobaha Ganacsiga Magaalada Laascaanood oo u xiran…
Magaalada Laacaanood Xarunta Gobolka Sool waxaa ka socda dibadbax Rabashado wata oo ay sameynayaan wadayaasha Bajaajka oo ka cabanaya qaar kamid ah dhalinyarada ay isku xirfadda yihiin oo ay xireen Ciidamada Booliiska Gobaladda Waqooyi.
Askarta iyo Wadayaasha ay xireen ayaa isku qabtay Ruqsadda ogolaanshiyaha wadista Gaadiid, balse Darawalada ayaa sheegay in aysan awoodin lacagta lagu jarayo oo aad uga badan dhaqaalaha ay ka helaan Mootada.
Wadayaashu waa ay ka dhega fureysteen amarka Hay’adda nabadgalyada marista waddooyinka, kolkii dambe waxaa bilawday howlgal ka dhan ah Darawada aan heysan Ruqsadda (License).
Dibadbaxyada ay sameynayaan Wadayaasha Bajaajka wax aka dhashay in la xiro goobaha ganacsiga, maadaama qaar kamid ah dadka cabashada sameynaya ay shidayaan daayiro, meelaha qaar tuuryeenayaan halka mararka qaar la maqlayo rasaas lagu kala eryayo.
Maamulka Gobolka Sool ayaa sameeyay dadaalo ay ku xalinayaan cabashada wadayaasha, kuna joojinayaan dibadbaxa rabshadaha wata oo galay maalintii labaad oo xiriir ah, si dib loogu furo Goobaha Ganacsiga.
Isu socodka Magaalada ayaa hakad galay, waxaana bartamaha Magaalada Laascaanood lagu dhex arkayaa Dhalinyarada isu soo baxa dhigeysa, halka meelaha isgoysyada ah ay ku sugan yihiin Ciidamada Booliiska oo wata Gaadiidka dagaalka iyo Shabaqlayaasha dadka lagu uruuriyo.
axadle 3884 posts